Connecticut WIC | JPMA, Inc
သငျသညျ WIC အစားအစာများသို့မဟုတ်ပမာဏနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများ
သင် WIC ရှေ့၌ဖြစ်ပါတယ်ထင်တဲ့အစာကိုဝယ်ခြင်းငှါမတတ်နိုင်ခဲ့ကြ
Xerox Customer Service သို့ဖုန်းဆက်ပါ 1-855-222-0510 အကယ်၍ …
သင်သည်သင်၏ PIN ကို reset သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်
ပြည်နယ် WIC ရုံးသို့ဖုန်းဆက်ပါ 860-509-8084 သို့မဟုတ်အခမဲ့ပေးဆောင်ရမည် 1-800-741-2142 အကယ်၍ …
သင်၏ eWIC ကဒ်ဖြင့်ဝယ်ယူရန်ပြmakingနာတစ်ခုရှိနေသည်
သင့်ဒေသခံ WIC Call ချက်ချင်း Program ကို! သူတို့ကသင့်ရဲ့အစားအစာကိုအကျိုးခံစားခွင့်ကို အသုံးပြု. ထံမှမည်သူမဆိုရပ်တန့်ခြင်းနှင့်သင်တစ်ဦးကဒ်အသစ်အရကူညီပေးပါမည်။
အဆိုပါ WIC ရုံးမှာ loaded လက်ရှိစားနပ်ရိက္ခာအကျိုးကျေးဇူးများကိုချက်ချင်းမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ စားနပ်ရိက္ခာလာမည့်လများအတွက်အကျိုးခံစားခွင့် 12 မှာသင့်ရဲ့ eWIC ကဒ်ပေါ်သို့အပ်နှံလိမ့်မည်: အစအဦးနေ့စွဲအပေါ် 00 သန်းခေါင်နှင့် 12 မှာသက်တမ်းကုန်ဆုံးပါလိမ့်မယ်: အအဆုံးသတ်ရေးနေ့စွဲအပေါ် 00 သန်းခေါင်။
English သို့မဟုတ်စပိန်အတွက် Connecticut WIC အစားအသောက်စာရင်းကိုကြည့်ရှုရန်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကလစ်နှိပ်ပါ။
သင်၏အကျိုးခံစားခွင့်လက်ခံရရှိမှု၏ဓာတ်ပုံကိုဖမ်းရန် WICShopper အက်ပ်တွင်“ ကျွန်ုပ်၏အကျိုးကျေးဇူးများ” ရွေးစရာကိုအသုံးပြုပါ
ကုန်စုံစတိုးဆိုင်ရှိငွေကိုင်ကိုကြည့်ပါသို့မဟုတ်သင်၏လက်ကျန်ငွေကိုထုတ်ယူရန် Customer Service Desk သို့သွားပါ။
လက်ကျန်ငွေစစ်ဆေးရန်သင်၏ eWIC ကဒ်နောက်ကျောတွင်အခမဲ့ပေးသောနံပါတ်သို့ခေါ်ဆိုပါ။
အလည်အပတ် www.ebt.acs-inc.com သင်၏ချိန်ခွင်လျှာကိုကြည့်ရှုရန်နှင့်ပုံနှိပ်ရန်။
သင်၏ eWIC ကဒ်ဖြင့်စျေးဝယ်ပါ
ဒါဟာအမြဲငွေပေးချေမှုမဆိုအခြားပုံစံများရှေ့၌သင်တို့ eWIC ကဒ်ပွတ်ဆွဲရန်မှတ်မိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
မဆိုကျန်ရှိသောလက်ကျန်ငွေငွေသား, EBT, SNAP, ဒါမှမဟုတ်စတိုးဆိုင်ကလက်ခံပေးချေမှုတခြားပုံစံတွေနဲ့ paid နိုင်ပါသည်။
သင့်ရဲ့ PIN ကိုခန့်မှန်းဖို့မကြိုးစားကြဘူး။ မှန်ကန်သော PIN ကိုတတိယပါအပေါ်ထဲသို့ဝင်မပါရှိဘူးဆိုရင်, သင့် PIN ကိုသော့ခတ်ပါလိမ့်မည်။ ဒါဟာတစ်စုံတစ်ဦးကသင့်ရဲ့ PIN ကိုခန့်မှန်းနှင့်သင့်အစားအစာအကျိုးခံစားခွင့်ရတဲ့နေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖြစ်ပြုမိသည်။ သင့်ရဲ့ကဒ်ကိုသော့ဖွင်နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိပါတယ်:
သင့်ရဲ့ eWIC ကဒ်၏နောက်ကျောအပေါ်သေဆုံးသူအခမဲ့အရေအတွက်ကို Call